I-comzy 2 bd arm suite by DT and trendy Marda loop - I-Airbnb
I-comzy 2 bd arm suite by DT and trendy Marda loop
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNatasha
I-wifi ekhawulezayo ye-63 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Yonwabela izinto ezintle kwigumbi lethu elinomnyango ophumela ngaphandle eliyi-2. Kwindawo yokuhlala entle ekufutshane neepaki, indawo yokubhaka edumileyo ekuthiwa yiGlamwagen kunye nemizuzu eyi-7 xa uhamba ngemoto usiya eMarda Loop okanye indlela elula eya kwiintaba. Amagumbi okulala ayi-2 anekhitshi elipheleleyo kweli gumbi langaphantsi linento yonke oyidingayo ukuze uhlale ixesha elide okanye uhlale ixesha elide, ugcwalise indawo yomnyango ecaleni kweyadi kunye nendawo yokupaka esimahla esesitratweni. Ilungele iholide okanye indawo onokuyisebenzisa njengendawo yokuhlala.
Igumbi lethu elinomnyango ophumela ngaphandle likusa kwindawo yokuhlala entle evulekileyo nenkulu netofotofo, indawo yomlilo yakudala enee-intshi eziyi-42 zeTV ezixhonywe ngasentla (ezijingayo ukuya apho ufuna ukuya khona), idinette enebhari yekofu kunye nekhitshi elinento yonke efunekayo kule mihla kunye nebhari entle enomphezulu wetafile. Uza kuqaphela zonke iintlobo zezinto ezikroliweyo nezibangel 'umdla endizilungiseleleyo kuhambo lwaseIndiya, eMalaysia nakwamanye amazwe aseAsia.
Siza kukwamkela ngamagumbi okulala ayi-2. Eyokuqala ibizwa ngokuba ligumbi le-Serentiy. Phumla kwibhedi ye-Brass Queen, kunye ne-duvet etofotofo, ngakwindawo yomlilo yesibini kunye nezinto ezithe chatha ezenziwe ngezandla zaseIndiya.
Okwesibini, sikhangele phambili ekukwamkeleni kwiJaipur Room yethu. (Ibizwe emva kodonga olukhulu olujingayo olubonisa izinto ezenziwe ngezandla zaseJaipur eIndiya) Uza kufumana ibhedi yosuku apho ukuze uphole, ulale okanye uguqulwe ube yibhedi enkulu. Ikona inendawo yokuhlala kwaye kukho idresa, isipili esikhulu kunye nekhabhathi.
Igumbi lokuhlambela lingaphandle nje kwegumbi Lokuthula elineshawa engqongwe yiglasi nesipili esinezibane ngokungathi uza kuhlala kumajelo onxibelelwano!
Sinomatshini omkhulu wokuhlamba nowokomisa owenzelwe igumbi lakho kuphela.
Intsapho yaseGlamwagen yindawo endala neyomeleleyo kwi-S. quadrant of Calgary. Inika imvume elula yokuphuma esixekweni kuhambo losuku oluya eBanff naseCanmore ngasentshona ngokunxulumene neTranscanada Highway ekumgama wemizuzu eyi-10.
Enye yeepaki ezithandwa kakhulu zokuhamba ngeenyawo nezamabhayisekile ekuthiwa yiGlenmore Park yimizuzu emalunga neyi-5 ukusuka endlwini ngemoto. Kukho zonke iintlobo zemizila apho ukuze wonwabele uhambo lwasemva kwemini. Yima kwi-E Eagle Eagle khasino xa usendleleni eya ekhaya ukuze uthi wenze njalo.
I-Marda Loop inazo zonke iintlobo zokutya, ikofu kunye neziselo. Paka imoto yakho kwenye yezitrato ezisecaleni uze uzame ezinye zazo!
IMount Royal University imizuzu eyi-3
I-Ambrose College imizuzu eyi-11
I-Rocky View General Hospital imizuzu eyi-8
Isibhedlele sabantwana iAlberta imizuzu eyi-13
Iziko Lezonyango Leenyawo Imizuzu eyi-12
I-Chinook Centre imizuzu eyi-10
Bendifuna nje ukubulisa kwakhona!. Andihlali kwisayithi kodwa andikho kude. Ndiyayazi kakuhle indawo kwaye ndihlala ixesha elide eCalgary. Ndazise ukuba unemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
Inombolo yomthetho: BL250904